RASMI: Mid Ka Mid Ah Xiddigaha Da'yarta Barcelona Oo Heshiis Rasmi Ah Ugu Wareegay Koox Kale - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaRASMI: Mid Ka Mid Ah Xiddigaha Da’yarta Barcelona Oo Heshiis Rasmi Ah Ugu Wareegay Koox Kale
RASMI: Mid Ka Mid Ah Xiddigaha Da’yarta Barcelona Oo Heshiis Rasmi Ah Ugu Wareegay Koox Kale
Barcelona ayaa waxa si rasmi ah uga tegay mid ka mid ah xiddigaheedii da’yarta ee usoo baxayay, kaas oo heshiis rasmi ah ugu wareegay kooxda reer France ee OGC Nice.
Madaxweynaha Barcelona ee Joan Laporta ayaa wada qorshihiisii ahaa inuu iibiyo ciyaartoyda kooxda ee waqtigan aan aadka loogu baahnayn, si ay u helaan lacago kaash ah oo ay iskaga furfuraan dhibaatada dhaqaale ee adag ee ay kooxdu ku jirto.
Kaddib saxeexyadii Memphis Depay, Eric Garcia iyo Sergio Aguero oo si bilaash ah ugu soo wareegay iyo Emerson Royal oo ay kasoo iibsadeen Real Betis, Barcelona ayaa hadda ka shaqaynaysa sidii ay ciyaartoydeeda qaarkood u iibin lahayd.
Ka hor inta aan loosoo gelin ciyaartoyda gudaha kooxda, Barcelona ayaa waxa si rasmi ah u macasalaameeyey laacibka amaahda kaga maqnaa ee Jean-Clair Todibo oo bishii February ee sannadkan ay amaah ku siiyeen kooxda reer France ee Nice.
Jean-Clair Todibo oo u dhashay waddanka Faransiiska ayay kooxdiisa Nice ka shaqaysiisay qodob ku jiray heshiiskii amaahda ahaa oo dhigayay in laacibkan ay si rasmi ah ugula wareegay karayso 8.5 milyan oo Euro, taas oo ay si rasmi ah u xaqiijisay inay bixinayso, Jean-Clair Todibo na yahay ciyaartoy iyaga ka tirsan.
Laacibkan ayaa Barcelona kusoo biiray January 2019 isagooi ka yimid Toulouse oo ka dhisan Faransiiska, waxaana uu muddo ku qaatay kaydka isagoo kaliya afar kulan oo LaLiga ah u saftay ka hor intii aan heshiis amaah ah loogu dirin kooxda reer Germany ee Schalke.
Barcelona ayaa heshiiska amaahda Schalke waxay ku dartay qodob dhigayay in laacibkan uu si rasmi ah ugu wareegi karayo Schalke lacag dhan 25 milyan oo Euro, balse lama fulin qodobkaas, isagoo markaas kaddibna amaah ku tegay Benfica oo iyaduna iska soo celisay.
Si kastaba, Jean-Clair Todibo ayaa si rasmi ah uga mid noqday ciyaartoyda kooxda Nice, iyadoo Barcelona helaysa 8.5 milyan oo Euro oo lagu daray lacago kale oo ku xidhnaan doona bandhiggiisa iyo guulaha uu la gaadho kooxdiisa cusub.